0 Saturday April 20, 2019 - 09:29:05
Xoogag aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa weeraro safballaaran ah ku qaaday saldhigga ciidamada Xabashida Itoobiya ay ku leeyihiin Garbahaareey.
Idaacadda Islaamiga Alfurqaan ayaa wareysi xiisa leh la yeelatay Xildhibaan Cabdi Raxmaan Ibbi oo kamid ah baarlamaanka dowladda Federaalka.
Tobaneeyo kamid ah askarta iyo saraakiisha Booliska dowladda Faransiiska ayaa naftooda gooyay xilli khalalaasa siyaasadeed uu ka jiro magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi.
0 Friday April 19, 2019 - 09:29:05
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qarax aad u xooggan oo mas'uuliyiin katirsan maamulka isku magacaabay Hirshabelle lagula beegsaday gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
0 Tuesday April 16, 2019 - 08:35:18
Khasaara xooggan ayaa ciidamada Kenya kasoo gaaray weerar markale lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Jubbada Hoose ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Xoogaga Al Shabaab ayaa gudaha magaalada Baydhabo ka geystay weerar lagu dilay askari katirsan ciidamada Xabashida Itoobiya.
0 Saturday April 13, 2019 - 08:05:23
Dowladda Kenya ayaa xaqiijisay in weerar hubeysn oo ka dhacay duleedka magaalada Mandheera uu dhaliyay khasaara dhimasho oo soo gaartay mid kamida saraakiisha ciidamada Booliska.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dibad baxyo saameyn reebay oo maanta gilgilay inta badan waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho.
0 Friday April 12, 2019 - 08:30:22
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xooggan oo ciidamo kawada tirsan dowladda Feeraalka Soomaaliya maanta ka dhaxmaray degmooyin katirsan gobolka Banaadir.
0 Thursday April 11, 2019 - 10:42:41
0 Thursday April 11, 2019 - 08:30:22
0 Wednesday April 10, 2019 - 11:01:32
Maamulka isku magacaabay Hirshabelle ayaa markii ugu horraysay ka hadlay biya la'aanta baahsan ee kajirta degmooyin iyo deegaanno katirsan Sh/dhexe.
Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa ku dhawaaqday in ay dhulka soo dhigay diyaarad dagaal oo uu leeyahay Melleteriga Mareykanka ee duullaanka gardarada ah ku jooga wadankaas muddo 18 sanadood ah.
0 Tuesday April 09, 2019 - 08:58:22
0 Monday April 08, 2019 - 08:58:22
Dibad baxyo rabshado wata ayaa ka bilaawday mid kamida gobollada ugu caansan wadanka Xabashida Itoobiya ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
0 Saturday April 06, 2019 - 09:40:57
Xoogag hubeysan ayaa caawa markale weeraro ku qaaday saldhigyo ciidamo katirsan dowladda Federaalka ay uga sugnaayeen degmooyinka Hodon iyo Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada Al Shabaab oo la wareegay deegaan Kaabiga Ku Haya Xuduudda Kenya.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta deegaannada kaabiga ku haya xad beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka Jubbada Hoose.
0 Friday April 05, 2019 - 09:40:57
Faafaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax xoogan oo xaly ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo lagu beegsaday Saraakiil katirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Thursday April 04, 2019 - 09:40:57
0 Wednesday April 03, 2019 - 09:40:57
Nin Siyaab leh uga Badbaaday Xukun Qisaas ah oo lagula Fulin lahaa Magaalada Ceelbuur!
Fagaare kuyaal magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud bartamaha dalka Soomaaliya waxaa maanta isugusoo baxay boqolaal qof si ay udaawadaan xukun qisaas ah oo lagu fulin lahaa ruux gacan ku dhiigle ah.
Qaraxyo Gaadiid looga gubay Ciidamada AMISOM oo ka dhacay Duleedyada Galbeed iyo Waqooyi Ee Muqdisho.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in markale qarax khasaara badan dhaliyay lagula beegsaday ciidamada shisheeyaha AMISOM ee duullaanka ku jooga deegaanno iyo degmooyin katirsan gobolkaasi.
Siyaasiyiin Dhaliilay Qorshaha uu Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ku wajahayo Amniga Muqdisho.
Boqolaal katirsan maleeshiyaadka dowladda Federaalka ayaa lagusoo daadiyay waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Muqdisho.
Xiisada colaadeed ayaa lagasoo sheegayaa xaafado katirsan magaalada Muqdisho halkaas oo ay rasaas isku weydaarsanayaan ciidamo kawada tirsan dowladda Federaalka.